१६ बर्षिय किशोरीलाइ सबैको सामू बलात्कार गर्न आदेश दिइयो, किन? – Ekathmandunepal
Homeब्लग१६ बर्षिय किशोरीलाइ सबैको सामू बलात्कार गर्न आदेश दिइयो, किन?
२ पुष २०७४, आईतवार १९:३६ ekathmandu Nepal ब्लग 0
पाकिस्तानको एक गाउमा मानवीयता भुलेर त्यहाका ठालुहरुले किशोरीलाई बलात्कार गर्ने आदेश गरेका छन । पाकिस्तानको मुल्तानमा एक किशोरीमाथि बलात्कारको आदेश दिएको आरोपमा २० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । युवतीको दाईले एउटी बालिकामाथि बलात्कार गरेका थिए । त्यसैको बदला स्वरुप पञ्चायतले बहिनीलाई बलात्कार गर्ने आदेश दिएको हो । प्रहरीका अनुसार दुवै पीडितका परिवार नातेदार हुन् । दुवै परिवारका व्यक्तिहरुले मिलेर यो आदेश दिएको बताइएको छ ।
प्रहरी अधिकृत अल्लाह बख्सले भने, ‘जिरगा गाउाको पञ्चायतले सजायको रुपमा १६ वर्षीया किशोरीको बलत्कार गर्ने आदेश दियो किनकी उनको दाईले १२ वर्षीया बालिकाको बलात्कार गरेका थिए ।’ १३ वर्षीया बहिनीलाई काकाको छोराले बलात्कार गरेका थिए । यसको सजायका रुपमा जिरगाले उजुरीकर्तालाई अभियुक्तको बहिनीमाथि बलात्कार गर्न आदेश दिएको थियो । पञ्चायतको आदेशसागै बहिनीको बलात्कार भएको थियो ।
पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार किशोरीलाई मानिसहरूको अगाडि उपस्थित हुन लगाएर सबैका सामू बलात्कार गरिएको छ । दुवै किशोरीका आमाले घटनाको विरोध गरेका थिए । पछि उनीहरूले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । प्रहरीले घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । प्रहरीले २५ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दर्ता गरेको छ । १३ बर्षीय किशोरी बलात्कार गर्ने युवक भने फरार छन् । एजेन्सी
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (480)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (452)
माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो (357)
बच्चा जन्माउनका लागी सेक्स गर्ने ६ वटा उत्तम… (290)
पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई (252)
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (220)
दिल्लीले हारको कारण पत्ता लगायो, अबको खेलमा सन्दीप… (214)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (202)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,290)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,203)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,797)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,555)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,349)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,335)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,299)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,190)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,160)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (1,996)